Ciidamada Iiran oo qabtay markab saliidda qaada oo ku gooshayay calanka Britain – Radio Daljir
Luulyo 20, 2019 7:29 b 0
Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan (IRGC) ayaa sheegay inay qabteen markab saliidda qaada oo ku gooshayay calanka Britain xilli uu gooshayay gacanka Hormuz, waxaana ay ku eedeeyeen inuu kusoo xadgudbay biyaha caalamiga ah, iyadoona tani ay sare usii qaaday xiisadda gacanka Cadan ee Iiraan iyo dowladaha galbeedka.
Markabkan Stena Impero ” waxaa la wareegay ciidamada kacaanka ee Iiraan, kadib codsi uga yimid ururka badaha iyo dekedaha ee gobolka Hormozgan , xilli uu ka gudbayay gacanka Hormuuz, isagoona aan wax tixgalin ah siinin bisha caalamiga” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay ilaalada Iiraan.
Markabkan ayaa lagu wareejiyay masuuliyiinta gobol ka mid ah dalka Iiraan, si looga qaaday xeerarka uga degsan dowladda Iiraan, laguna sameeyo baaritaano.
Mulkiilaha markabkan ayaa sheegay markabka inay qabteen diyaarado yaryar oo helicopter oo ay Iiraan leedahay, waxaana uu intaasi kudaray inay awoodi karin inay la xiriiraan.
Markabka ayaa laga leeyahay dalka Sweden, isagoo ku gooshaayy calanka Britain, waxaana la waayay isagoo maraya jaziiradda Larak oo qadka uu ka baxay.
23- shaqaalle ayaa la socda markabkan, sida laga soo xigtay shirkadda iska leh.
Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Iiraan ayaa sheegay inay raadinayaan macluumaan dheeraad ah oo markabka ku saabsan, isagoona intaasi ku daray inay qiimaynayaan dhacdada markabkan soo wajahay.
Marin biyoodka Hormuz ayaa waxaa adeegsada maraakiibta ugu badan ee caalmaka ee saliidda, waxaana ka jirtay xiisad u dhaxaysay Mareykanka iyo Iiraan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay.
Britishka ayaa horay gacanta ugu dhigay markab ay Iiraan leedahay.